Fitaovana hoditra - Guides WoW | WoW Guides
Ireo mpanafika ovay ny hoditra amin'ny vokatra ilaina amin'ny famoronana fiadiana maivana amin'ny hoditra na paositra.
Aloha! Amin'ity torolàlana ho an'ny Zandalari Leatherworking sy Kul ity dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 150 dia hampianarinay anao ny lalan-kaleha ...
Fitaovana hoditra amin'ny ady ho an'i Azeroth
Salama daholo. Androany aho mitondra aminao ny vaovao sasany momba ny asa momba ny hoditra ao Battle for Azeroth. Ireo rehetra…
Torolàlana momba ny hoditra 1-800
Aloha! Ao amin'ity Torolàlana momba ny hoditra ity manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 800 dia hampianarinay anao ny fomba fivezivezena amin'ny fomba mora sy haingana indrindra ...
Torolàlana momba ny hoditra amin'ny legiona - Raiso ny fomba fahandro rehetra
Tsara! Ny fiasan'ny hoditra ao Legion, toy ny sisa amin'ireo asa, dia novaina tamin'ny lafiny maro. On…
Misiona miasa amin'ny hoditra ao Legion
Tongasoa eto amin'ny tari-dalan'ny Misiona miasa amin'ny legion. Amin'ity torolàlana ity izahay dia mitondra anao ny iraka rehetra ...
Draenor Leatherworking Guide 1-700 Nohavaozina 6.2
Tongasoa eto amin'ny torolàlana Warlords of Draenor Leatherworking izay hanampy anao hahatratra ny ambaratonga 700, koa ...
Torolàlana momba ny hoditra 1-600
Ity ny torolàlana hampakatra Fitaovana hoditra manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 600 ao amin'ny Mists of Pandaria. Ampirisihina mafy izy io hanambatra azy
Skinning ary afaka mamorona zavatra tsara ianao fiadiany, fanamafisana y amponga. Ny ankamaroan'ny entanao dia hampiasaina hampitaovana (
Rogues) na meshes (
mpanasitrana), na izany aza, ny sisa kilasy dia maniry ny anao Fiadiana amin'ny tongotra.
Torolàlana momba ny hoditra 1-525
Niverina ny Deathwing ary niova ny zava-drehetra. Betsaka ny zava-baovao ... Nefa eto izahay mitondra torolàlana momba ny fomba fampidinana ny Asa miasa amin'ny hoditra amin'ny fomba haingana indrindra amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 525.
Ny leatherworking dia asa mazàna amin'ny sokajy izay mampiasa hoditra na mail ho an'ireo zavatra noforonina, na dia tsy voatery hatao aza izany. Furriers dia manamboatra fitaovana tsara, ary mandritra ny Content patch dia matetika izy ireo no mahazo hoditra vaovao mifanaraka amin'ny haavon'ny fitaovana vaovao.
Hihanika ity asa ity dia tena ilaina tokoa ny mampiasa ny Skinning na dia tsy izany aza dia tsy maintsy mandehandeha any anaty kitapo volamena ianao ary miomana hamela harena be ao amin'ny Auction House.
Hamafiso ny antsyo ary amboary ny rivet mba hodiovina amin'ny hoditra tsara indrindra.
Torolàlana momba ny hoditra 450-525
Ity torolàlana momba ny hoditra ity dia mikendry ny hanoro anao ny fomba mora indrindra ampidirina Haavo vita amin'ny hoditra 450-525. Angamba mbola tsy nampakatra ianao Fitaovana hoditra manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 450, aza adino ny mitsidika ny anay Torolàlana momba ny hoditra hahatratra ny haavon'ny max alohan'ny hanombohan'ny Cataclysm. Miezaha tsy raisina ho baibolin'ny rehetra satria mety mbola misy zavatra tokony hosorana. Ataovy ao an-tsaina fa aorian'ny ambaratonga 500 dia tsy ho afaka hianatra lamina misimisy kokoa avy amin'ireo mpampianatra isika, tsy maintsy mahazo azy ireo ao an-trano-maizina, ny fanafihana vaovao, na mividy izany amin'ireo mpivarotra.
Azonao atao ny manamboatra ny setrin'ny PvP vaovao na ny sehatra fanombohana 85 vaovao, afaka misafidy izay mitambatra ianao, azo antoka fa hamela anao hahatratra ny haavo 525. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy azo atao ny manamarina izay atolotry ny mpivarotra anay. Ny lamina bracer vita amin'ny enchanted dia ampianarina antsika amin'ny ambaratonga fahaizana 500, noho izany dia hifantoka amin'io lalana io izahay.
Torolàlana momba ny hoditra 1-450
ny Wow mpitari-dalana hace 12 taona .
Ao amin'io Torolàlana momba ny hoditra, asehonay anao ny fomba haingana sy mora indrindra hampiakarana ny asanao momba ny hoditra amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 450.
Ny fampifangaroana tsara indrindra amin'ny hoditra dia ny Skinning, saingy tsy fitambarana tsy maintsy atao izany. Mila mividy ireo fitaovana fotsiny ianao fa tsy mahazo azy manokana. Raha manapa-kevitra ny hanambatra ny hoditrao ianao miaraka amin'ny Skinning (izay mahazatra) dia afaka manaraka ny anay ianao Torolàlana momba ny hoditra.